Izindaba - Izinzuzo zemishini engalukiwe?
Imikhiqizo eminingi isebenzisa izindwangu ezingalukiwe, ezinjengamanabukeni asetshenziswa yizingane, nemikhiqizo yendwangu njengamamaski. Kunezinzuzo eziningi zezindwangu ezingalukiwe. Inokuphefumula okuhle komoya nomsebenzi omuhle wokumunca amanzi. Ngakho-ke, izindwangu ezingalukiwe zisetshenziswa ezinhlakeni ezahlukahlukene. Kodwa-ke, ngenxa yolwazi olunqunyelwe lomhleli, ulwazi esilwaziyo lincane kakhulu. Imishini engalukiwe ingumshini osetshenziselwa ukukhiqiza izindwangu ezingalukiwe, ngakho-ke yiziphi izinzuzo zokusebenzisa imishini engalukiwe ukukhiqiza? Ungalandela isihleli ukuze ufunde isingeniso esilandelayo ukuphendula ukungabaza kwakho.
1. Ukugeleza kwenqubo yonke kwemishini engalukiwe kungenziwa kube okuzenzakalelayo ngokuphelele, okudinga umuntu o-1 kuphela kwabayi-2 ukuthi basebenze, okungasindisa abasebenzi
2. Imishini yendwangu engalukiwe ingalungisa ijubane lokukhiqiza nosayizi womkhiqizo ngaphakathi kwebanga. Imishini yendwangu engalukiwe isebenzisa ukusebenza kwesikrini sokuthinta, ifakwe uhlobo lokunyathela ubude obungaguquki, ukulandela ngomkhondo isithombe, ukubala okuzenzakalelayo nokubhoboza okuzenzakalelayo namanye amadivayisi wokulawula izimboni, okulula ukuwasebenzisa.
3. Ukuze uqhubeke uqonde umphumela wokonga amandla wemishini engalukanga, okokusebenza okungalukiwe kunomsebenzi wokuphinda usebenzise izinto zokwakha ezingaphezulu ngesikhathi senqubo yokukhiqizwa kwemishini engalukanga, futhi iqoqe ngokuzenzakalela imfucuza esele kwinqubo yokukhiqiza , elusizo ekusetshenzisweni kwesibili futhi inciphisa ukuqina kwabasebenzi. Ukwandisa ukusebenza kahle komsebenzi. Ukutholwa kwezinsizakusebenza akugcini ngokusindisa izinsizakusebenza, kepha futhi kunomthelela omuhle wokuvikela imvelo.
Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa okwenziwe ngesandla okwedlule kwezindwangu ezingalukiwe, ukusetshenziswa kwemishini engalukanga ukukhiqiza izindwangu ezingalukiwe kungasheshisa isivinini sokukhiqiza; ngasikhathi sinye, imishini engalukanga ilula ukusebenza futhi ayidingi ukuthi umenzi aqashe abasebenzi abengeziwe bezobuchwepheshe abazosebenza; imishini engalukiwe Iphinde ihambisane nezidingo zentuthuko esimeme futhi ithobela umgomo wokuvikela imvelo. Lezi izinzuzo zemishini engalukanga futhi uchaze ukuthi kungani imishini engalukiwe ithandwa yimakethe. Kunemikhiqizo eminingi yemishini engalukanga. Izinhlobo ezahlukahlukene zabakhiqizi bemishini engalukanga zinemiphumela ehlukile ekusetshenzisweni kwemishini engalukanga ngenxa yokwehluka kwezinqubo zokukhiqiza. Ungahlola ulwazi lokusebenzisa imishini engalukwanga ngaphambi kokuthenga.